साताको पहिलो दिन सिगंटी हाइड्रोइनजीको शेयरमुल्यमा सकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ताको मुल्य कति ? – OnlinePahar
साताको पहिलो दिन सिगंटी हाइड्रोइनजीको शेयरमुल्यमा सकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ताको मुल्य कति ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १४:४९ Basanta Khanal	0 Comments	share market
साताको पहिलो दिन (आइतबार) नेप्सेमा सिगंटी हाइड्रोइनर्जी लिमिटेडको शेयरमुल्यमा सकरात्मक मुल्य लागेको छ । कारोबार सुरु भएको २ घण्टा बित्दाँ कम्पनीको शेयरमुल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कम्पनीको शेयरमुल्य प्रतिकित्ता रु. ४७६ पुगेको छ । आज कम्पनीको शेयर कारोबार रु. ४४१ बाट सुरु भएको छ । मार्केट डेपमा कम्पनीको ३९ हजार ३३७ कित्ता शेयर खरिदमाग भएको छ भने १ हजार ७०३ कित्ता शेयर बिक्री माग भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : काठमाडौं : नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो कारोबारमा सेयर बजारमा आकर्षक चमक देखिएको छ । नेप्से सूचकमा आकर्षक वृद्धि भएको छ । यस्तै, सूचकको वृद्धिलाई सेयर कारोबार रकमले पनि राम्रो साथ दिएको छ । आइतबार दिउँसो १ः३० बजेसम्म नेप्से सूचक ८०.५९ अंकले बढेर २९६३.९९ विन्दुमा पुगेको छ । समग्रमा बजार २.७९% ले बढिसकेको छ । यस्तै, ७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन थालेको छ । कम्पनीहरुले वर्षभरीको कमाई सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन् । आइतबार मात्र कामना सेवा विकास बैंकले आकर्षक प्रगति गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै, अन्य सूचीकृत कम्पनीको विवरण पनि राम्रो आउने लगानीकर्ताले आशा गरेका छन् । यता, अब केही समयदेखि नै सूचीकृत कम्पनीहरुले लाभांश पनि घोषणा गर्न सुरु गर्नेछन् । जसका कारण सेयर बजारमा थप चहलपहल बढ्ने देखिन्छ । अहिले सेयर खरिद गर्नेले छोटो समयमै लाभांश हात पार्नसक्ने भएकाले बजार थप सुधार हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
← जीवन विकास लघुवित्तको शेयर रजिष्ट्रारमा एनएमबि क्यापिटल (ओपनिङ रेञ्ज कति ?)
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – ०४ साउन २०७८ सोमवारको राशिफल पढौं →
नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरुचारु गर्न पाँच वायुसेवालाई स्वीकृति
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:१३ Basanta Khanal	0
अब खोप कहिले ल्याइदै छ?
सीइडीबी हाइड्रोपावरको आइपीओ नेप्सेमा सूचीकृत, कतिमा खुल्छ कारोबार ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १५:२९ Basanta Khanal	0